ဂျိုကာ: August 2011
music DJ တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချင်တဲ့ လူတွေအတွက်ပါ....ကိုယ်တိုင် တီးလုံးအလန်းတွေဖန်တီးချင်တဲ့လူတွေနဲ့သီချင်းတွေကို remix လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ software လေးပါ... Feature တွေလည်း တော်တော်လေးစုံပါတယ် လိုချင်ရင်အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါဗျာ...
Mediafire ၊ Multiupload
Posted by ဂျိုကာ at 2:28 PM2comments
Calculator ကို အလွယ်တကူအသုံးပြုချင်တဲ့ လူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ...ပေ့ါပေ့ါပါးပါးလေးနဲ့ဘယ်နေရာသွားသွား အသုံးပြုလို့ ရအောင် portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..strick ထဲ ဆောင်ထားလို့ ရတာပေ့ါ..လိုအပ်ရင် ယူသွားပါ ..အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် ...။
Posted by ဂျိုကာ at 12:32 AM0comments
Gmail ကို Hacking အလုပ်ခံရတယ်ဆိုတာ
Gmail ကို Hacking အလုပ်ခံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့အမှားကြောင့် ဖြစ်တာများပါတယ်...အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကို Hacking အလုပ်မခံရအောင် ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို လေ့လာမှတ်သားထားသလောက်လေးကို post အဖြစ်တင်လိုက်တာပါ......။
Posted by ဂျိုကာ at 7:52 PM0comments
ခုဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောပွဲတွေကလည်းစနေပီ...ဒီတော့ ကျတော်လည်း ဘောလုံးကို ၀ါသနာပါတဲ့ လူတွေအတွက် စက်ထဲမှာရှိတဲ့ Nike-soccer ဆိုတာလေးတင်ပေးလိုက်တာပါ... ဘောလုံးကန်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ....အရင်ဆုံး ပေးထားတဲ့ software လေးကို ယူလိုက်ပါ...rar ဖြည်လိုက်ရင် Nike-soccer ဆိုတာလေးကို တွေလိမ့်မယ်.. ပီးရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်...အဲ့ဒါဆိုရင် စပီးတော့ ကန်လို့ ရပါပီ...ကစ်တွေကတော့ ပျင်းသလားမမေးနဲ့ ...မီးတောက် ကန်ချက်တွေပါ..ခေါင်းတိုက်လိုက်ရင် computer ရဲ့ screen ပါ အက်ကုန်အောင်ကို ပြင်းပါတယ်....ပြောနေရင်လေရှည်နေမှာမို့ လို့မပြောတော့ပါဘူး.....ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ.. သဘောကျမှာပါ..အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ..
Posted by ဂျိုကာ at 9:36 PM0comments
Labels: desktop background, software
Windows7Autorun Disabler v2.0
ဒီ software လေးက Computer မှာ USB Drive တွေနဲ့CD Drive တွေကို autorun ပေးထားတဲ့လူတွေမှာ တချို့ USB Drive တွေနဲ့CD Drive တွေကနေ Virus တွေ အလွယ်တကူ ၀င်လာတတ်ပါတယ်....အဲ့ဒါကြောင့် autorun နဲ့ ရေးထားတဲ့ Bat File တွေရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ...မိမိကြိုက်နှစ်သက်တာကို ရွေးပီး Disable ပေးလို့ ရပါတယ်....ဘယ်နေရာသွားသွား ဆောင်သွားလို့ ရအောင် portable လေးတင်ပေးထားပါတယ်..လိုချင်ရင် အောင်မှာဒေါင်းသွားပါ....
Posted by ဂျိုကာ at 9:18 PM0comments
Your uninstaller Pro v7.3.2011.2
တင်ချင်တဲ့ software လေးတွေတင်ပီး ပြန်ဖျက်ချင်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူသုံးလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်းမေးလို့၇ှာပေးရင်တခါတည်း တင်ပေးလိုက်တာပါ...သုံးရတာလည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်...လိုချင်ရင်အောက်မှာ ယူသွားပါခင်ဗျာ.....
Posted by ဂျိုကာ at 10:29 PM0comments
WGT Golf Challange from Google Chrome
Google ကနေ သူရဲ့ Browser အသစ်ဖြစ်တဲ့ Chrome ကိုအသုံးပြုတဲ့ user တွေအတွက် online game အနေနဲ့ ဆော့လို့ ရအောင်တင်ပေးထားတဲ့ browser game လေးပါ...
Golf ရိုက်တဲ့ game ကို သဘောကျတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ရှယ်ပေ့ါဗျာ....
Posted by ဂျိုကာ at 8:21 PM0comments
သိထားသင့်တဲ့ keyboard shortcut (100)
Posted by ဂျိုကာ at 12:22 AM0comments
ဒီကောင်လေးက တခါတလေ gtalk မှာ အလုပ်တွေ၇ှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ hi ဆိုတဲ့ လူတွေများလွန်းရင် မပြန်နိုင်ဘူး ဖြစ်တတ်ပါတယ် (ကိုယ်တွေ့ ပါ :D) အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေနဲ့ကိုယ်သွားစရာ၇ှိလို့ စက်ကိုဖွင့်ထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်....
Posted by ဂျိုကာ at 7:20 PM0comments
Posted by SpaceX at 1:19 PM0comments
အပျင်းပြေဆော့ဖို့poker (ကာစီနို) ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်တယ်....ဆော့လို့ ကောင်းပါတယ်.....အွန်လိုင်းနဲ့ ပါချိတ်ပီး ဆော့လို့ ရပါတယ်...ဘာ install မှလုပ်စရာမလိုပါဘူး potable လေးပါ...လိုချင်ရင်ယူသွားပါ..အောက်မှ တင်ပေးထားပါတယ်....
Mediafire / ifile
Posted by ဂျိုကာ at 7:35 PM0comments
Linux ချစ်သူများ ၀င်းဒိုး xp ကို Linux စတိုင် ပြောင်းသုံးချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ယူဗျာ ဒေါင်းလော့ size ကတော့(10.21MB) ပဲရှိပါတယ်
Posted by SpaceX at 3:54 PM0comments
Posted by SpaceX at 2:48 PM0comments
PhotoInstrument 4.0 Build 401 Full + Crack.rar
ဓါတ်ပုံပြင် ၀ါသနာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဒါလေးနဲ့ ကလိကြည့်ပါ တော်တော် များများတော့ သုံးဖူးကြမှာပါ
ဒါပေမယ့် ဗားရှင်း PhotoInstrument4နှင့် 4.7 အထိကီးကတော့
Email Address:revenge@crew.com **Registration Key:02-UYNOGJIG တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတာ ကျနော်ကြုံဖူး ပါ...အင်စတေးလုပ်ပီး ကီးလည့်ပီး သုံးလိုက်တော့ ခဏပဲရတယ် ပီးရင် ကီးပြန်တောင်း
လို့ အဆင်မပြေဖြစ်ရတယ် ဒီမှာပါတဲ့ crack လေးကတော့ ဗားရှင်းအားလုံး သုံးလိုရတယ်
ဒါပေမယ့် crack ကို past လုပ်လိုက်ရင် ဗာရှင်း4ပဲဖြစ်သွားတယ် အမြဲတော့ သုံးရပါတယ်
လိုရင်တော့ အောက်မှာ သာဒေါင်းလိုက်ဗျာ
Posted by SpaceX at 3:36 PM0comments
Labels: photo editing, software